Miss Scum Slayer Alọgharịrị - Gụọ Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Miss Scum Slayer Mmụgharị nkezi 3.2 / 5 si 12
NA / A, o nwere ihe nlere 7.2K
Liexing, Ping Jun, romance
Na-agụ Miss Scum Slayer mụrụ, ọmarịcha manwa.
Manhwa bu otu esi akpo ndi eji eme Korea. Can pụrụ ịhụ na webtoon emekarị bụ nnọọ ewu ewu ma ọ bụ Korean manhwa.
Olileanya na ịkekọrịta ga-enyere gị aka ịghọta ihe Weebụ bu. Ka anyị soro ndị kacha mma Weebụ, elu Manhwa, Manhua, na free manga ugbu a na weebụsaịtị a!
Ihe ọjọọ FL ọzọ na-abọ ọbọ na scums na bitches! Ọbụna ya na onyeisi oche dinara maka na ọ chọrọ ịtụrụ ime! Ma onyeisi oche abụghị onye a ga-aghọgbu! Gịnị ka ọ ga-eme ma ọ jide FL anyị? Ọ ga-enye ya ezigbo “ntaramahụhụ”?
Yun Weinuan bụ enyi nwoke na ezigbo enyi ya ghọgburu wee gbuo ya na ndụ ikpeazụ ya. Dị ka akụkọ ọ bụla na-aga, ọ nwetara ndụ ọzọ wee ṅụọ iyi iji megwara ndị mejọrọ ya. Ma nwa ya na ndụ ikpeazụ agaghị alọta ọzọ. N’ihi ya, o chepụtara echiche, ya bụ, ka ọ chọta nwoke mara mma, soro ya dina, tụụrụ ime. O doro anya na ọ tụrụ anya na nwoke a ga-ewe oke iwe ma ọ gbapụchara…
Nwunye Maazị Lu na nzukọ nzukọ ya
Nwunye bụ onye nnọchite nzuzo
Bornlọ ụwa: oflọ nke Imegwara
Anyị agaghị anwụ ngwa ngwa!